Hevitra MPANOHARIANA | Andavanandro | 17
Ambohijatovo: Labozia ho an'ny matin'ny sida
2008-05-18 @ 16:21 in Andavanandro
Notontosaina teny amin'ny zaridainan'Ambohijatovo ny androm-pahatsiarovana ireo matin'ny sida rehetra. Araka ny fahalalàna dia sambany vao notsarovana teto Madagasikara ity vaninandro ity. Araka ny resaka dia tamin'ny enina hariva teo no nandrehetana labozia hanehoana izany fahatsiarovana izany.
Nandritra io fotoana io koa no nisehoan'Atoa Firinga Johnson sehatra voalohany hijoroany vavolombelona fa misy tokoa ny malagasy mitondra ny tsimokaretina VIH. Nisy fampisehoana moa nandritra io fotoana io. Nozaraina ihany koa ny labozia narehitra (fa saiky hitazandavitra ny maro amin'ny malagasy ary efa fanaony rahateo izany).
Ny somary nahatsikaiky raha nisy ny fananganantanana ka tonga teo amin'ny hoe hifandray tsy misy tahotra amin'i Johnson fa nisy nampidina tanàna teny an-tsehatra aloha ary dia maro koa ny olona nanatrika no nampidina ny tanany. Ny nahatsikaiky ahy faharoa dia nisy fitenenana tsy sazoka na diso toerana angaha hoe aza ailikilika i Johnson fa sao very irery ihany. Ampiantsika izy...(izany hoe hiara-very aminy isika?). Vazivazy iny aloha an!
Tsaralalàna: Ilay haitrano afovoan-tanàna
2008-05-17 @ 04:39 in Andavanandro
Hotel Sharon, Pharmacie Centrale, Archives nationales et à la fin c’est “seulement” le département de la logistique du ministère de la santé (côté ouest de la Pharmacie Centrale) qui a pris feu suite à un court circuit, dirait-on. Non! Après un bruit qui circule très rapidement faisant état de l’incendie de trois premiers sites cités précédemment s’est avéré finalement “fausse” après vérification; Ce sont les maisons très anciennes où se trouvent exactement à leur centre qui ont été victimes du feu aujourd’hui vendredi. On estime quand même la valeur du dégât à environ un milliard d’ariary sélon le ministre de la santé Jean Louis Robinson vénu expressement sur place.
Dia tsy miraharaha izay teny frantsay diso any aho satria tsy tenin’ikaky na tenin’ineny ary tsy teniko akory io. Nahagaga ahy fa dia nahavita io aloha aho. Tokony ho tamin’ny roa tolakandro teo ho eo no nanomboka ny fahenoana ny fielezan’ny setroka sy ny afo ka nampiolomay ny rehetra. Mifanila amin’ny “petite vitesse”, lalana manaraka ny tambohon’ny gara eny Tsaralalàna, ny trano ka nihazakazaka avokoa ny mpivarotra madinika hamonjy aina. Nanakatom-baravarana avokoa ny mpivarotra lehibe, ny an’ny karana mazava loatra, tapaka rahateo ny jiro ka izay manana gropy ihany no miasa ao an-trano. Mifanohitra amin’izany kosa fa indreny nihazakazaka ny jiolahimboton’Isotry te-hanararaotra ny toe-java-misy angaha. Soa ihany fa nosakanan’ny polisy, manana ny toeram-piasany eo ampitan’ny fitoeram-panafody indrindra, ny lalana mankany tsy hitsofohan’ny te-hijerijery fotsiny. Ny mpanao gazety ihany no nahazo alalana hanakaiky ny toerana.
Ny tsikaritra tamin’ity toe-java-misy ity ihany koa dia tany Ankadifotsy, Antaninandro, Behoririka no maty jiro sahabo ho adiny iray teo ho eo. Velona kosa anefa ny jiro teny Analakely sy Soarano. Nanomboka tamin’ny fotoana nahamay ny trano fitoeran’entan’ny minisiteran’ny fahasalamana, misy ny fitoeran’ny lay misy odimoka, ny kidoro, dabilio(?) ary fitaovana maro samihafa, tamin’ny roa ora voalaza etsy ambony ka hatramin’ny fotoana nandalovako teny tamin’ny valo ora alina dia mbola tsy niverina ny jiro nanomboka teny amin’ny Tana Plaza, ka hatreny amin’ny Cotona, mipaka eny Ambodifiakarana makeny amin’ny fasan-dRainiharo, amin’iny Ampasamadinika iny ka miolika aty ampitan’ny Conforama (National Store) ka mianavaratra manatona ny lapan’ny tanàna haorina indray saingy heveriko ho tsy tratran’ny aizina kosa ny Arikady.
Tahaka ny hafahafa izany hoe Zoma tolakandro ka tsy nisy fiara firy nandalo anoloanan’iny Boriborintany voalohany iny. Tsy nanaiky ny hisian’ny mpivarotra amorondalana mihitsy koa moa ny kaominina ka nalaladalaka tsy ahalalàna andro tsena manaraka iny lalambe Andrianampoinimerina (Ambodifilao) iny. Nivaha anefa izany nanomboka tamin’ny 5 ora sy sasany ka nahazo atsasak’adiny teo ho eo ny mpivarotra amoron-dalana hanao ny ataony. Oadray, miova koa izany zavatra tantaraiko izany.
Tamin’ny valo ora alina, tsy mbola nahita an’i Tsaralalàna maizina toy izany aho, nefa dia betsaka tokoa ny olona nifanaretsaka fa efa misy koa moa ny mpijorojoro mazava alina tsy hita endrika ao anaty aizina ao. Ny tobin-dasantsy ihany no ahitana jiro mirehitra. Hita ihany fa misy olona miala ny tranony amin’iny faritra iny, raha noheverina ho voafehy manko ny afo tamin’ny dimy mahery teo ho eo dia mbola tsy maty ny setroka na dia tamin’ny sivy ora alina aza (notazanin-davitra kosa io). Manahy angamba ry zareo fandrao miitatra ny afo ka aleo mankany amin’ny olom-pantatra aloha. Mahavariana anefa fa marobe tsy misy toy izany kosa ny olona amin’iny lalana Lacoste iny.
Tsikaritra fa nandritra ny haitrano dia tsy mbola mahalala marina izay trano may ny olona teny amin’ny manodidina teny. Ilay zandary nanontaniako aza namaly fa ny Arisiva nasionaly no may miaraka amin’ny ampahan’ny tranon’ny minisiteran’ny fahasalamana. Hitan’ny olona, tazan-davitra, ihany ilay trano saingy tsy fantany hoe inona moa io trano (midadasika na dia ntaolo aza) io. Izay no antony iray nampisaritaka ny filazan’ny olona hoe inona ilay trano may. Tsy nino ilay Arisiva aho satria fantatro ihany ny toerana misy azy fa ampita atsimo (mifanila amin’ny Caisse d’apargne) nefa ny trano (na faritra) tratra ampita avaratra. Niserana iray minitra teny manko aho (tena hoe iray minitra) nanamarina hoe taiza ho aiza tokoa moa izany may izany.
Tsaralalàna[Pharmacie centrale]: Trano may indray e!
2008-05-16 @ 12:58 in Andavanandro
Mahavariana fa dia misy trano may indray ao Tsaralalàna ao amin'izao fotoana izao ( zoma 16 mai 2008). Nanontany aho fa sao dia ny tobin'ny mpamonjy voina sy haintrano no may amin'izany? Angamba dia ho sampona fa tatitra tsy voamarina no milaza fa ny Hotel Shalimar io may io. Ny resaky ny olona moa tonga dia milaza fotsiny hoe:" Miala hetra indray izany fa be loatra ny hetra!". Asa anefa!
Fanitsiana: Ny Pharmacie Centrale no may
tantara mahatsikaiky: manenjika sarety
2008-04-30 @ 12:18 in Andavanandro
Noho ny tsy fahafahana firy dia izay sisa voangona aloha no omena ary heverina ho ao anaty fahafinaterana no andafasana ny vaovao. Tsy ilay tantara akory no mahafinaritra fa ny fomba intatarana azy no mba ezahina ho tsy hahasosotra loatra.
Tany amin'ny faritry Betioky any ity tantara mba lazaina ity. Tena nisy ity fa tsy noforonina tsy akory. Nahatsikaritra sarety dimy feno sokatra tsy azo aondrana (radiata) ny zandary sy ny fokonolona ka nanenjika azy ireo. Fa dia tena mandeha haingana mihitsy ireto sarety ireto rehefa natao ny fifanenjehana satria ny iray ihany sisa no tratra, fa ny hafa tsy hita nanjavonana. Tsy fantatro hoe tarihina soavaly ve sa misy maotera ireo sareto ireo... na ny mpanenjika koa no mandeha an-tongotra maka aina isaky ny telo kilaometatra. Fa dia nahatsikaiky ahy ihany aloha ny nandre ilay izy e! izaho izay vao haingana no nanoratra hoe "hakalin-tsarety" ity.
Diego: Hadalana ny hamerina ireo zaza mania any amin'ny ray aman-dreniny
2008-04-24 @ 10:32 in Andavanandro
Nanana ny akony teto amin'ny firenena ny heloka vitan'ny tanora sasany tao Antsiranana tao, ka nahatery ny mpitondra fanjakana nanao azy ho vaindohandraharaha tamin'ny fiandohan'ity taona ity. Atao hoe zaza tsy ampy taona manko nefa dia efa nahavita hatramin'ny namono olona mba hahatafiditra izay vaovao amin'ny fikambanana Foroche sy Pirates ho kazaran'ny batisan'izy ireo. Raha tazanindavitra dia hita fa saiky karazana maffia tsy mitsitsy mihitsy no natsangan'ireto andian'olona nampihorohoro ireto. Voatery nalefa lavitra ny toerana misy azy ireto zaza mania ireto ka ny tsy ampy taona dia tany Anjanamasina distrikan'Ambohidratrimo no natoby.
Efa hatramin'ny fisamborana ireto zaza ireto no nimenomenona ny ray amandreny fa hainy ny mifehy sy mitaiza ny zanany ka tsy mino izy ireo fa nahavita izany heloka bevava izany ny zanany. Ny fantatra aloha dia nangingina ny resaka karazana fampihorohoroana hatramin'ny namindrana ireto zaza ireto raha i Diego manokana (ny tanàna fa tsy ny faritra DIANA) no lazaina. Amin'izao fotoana izao indray dia re fa hilahatra an-dalambe ny ray amandreny hitakiana ny zanany hody any an-toerana. Fitiavan-janaka tokoa angaha izany. Ny hany manjavozavo amin'ity resaka ity dia ny fitakiana fototra: Takiana hivoaka ny fonja hody any amin'ny ray aman-dreniny ve sa takiana hogadraina any amin'ny fonja any? Raha nisy fitarainana nataon'ny ankizy nania amin'izay tsy rariny mety ho anahazo azy ireo ataoko fa mety hisy rariny ihany izany...saingy amiko karazany sazy ihany ny fanaovana azy ireo an-tsesintany.
Mananjò ny ray amandreny hitsidika ny zanany na dia efa nahavita hatramin'ny famonoana olona aza izy ireo, saingy amiko manokana matoa nafindra toerana izy ireo dia ny mba ho lavitra ny fanalokalofana ataon'izay mety ho lehiben'izy ireo mety tsy mbola voasambotra sy ny fahitana fa sarotra arovana ny fonja any Diego. Manaraka izany ny ampy taona kosa tsy ananany zo hitakiana ny handefasana azy any noho ny fonja manokana ho an'ny olona tena atahorana mbola tokana dia any Tsiafahy. Na hilahatra fahazato faharivo aza izy ireo rehefa any Tsiafahy dia any izany. Tsy nisy olona avy any amin'ny faritra atsimon'i Madagasikara raha nanana namana na tapaka nigadra tany Nosy Lava ka hitaky hoe avereno aty ireny olona ireny no higadra fa tsy any.
Farany, lasa ny eritreritro manao hoe ho an'ny tsy ampy taona anie ka tompon'andraikitra ihany koa ny ray aman-dreny ka tokony hisy sazy ho azy ireo koa e! sa tsy misy izany moa amin'ny lalàna? Izay angamba no mahatonga azy ireo hihetsiketsika tahaka izao ka mahatonga ny olona sasany hiteny hoe ilay fiarovana ny zon'olombelona toa ny mpangalatra sy ny mpamono olona ihany no tena arovany fa tsy misy iraharahiana izay norobaina sy novonoina mihitsy.
«Mialoha 1 2 3 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 25 26 27 Manaraka»